Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny firenena COMESA dia maniry ny fanalalahana ny habakabaka
Ireo firenena mpikambana ao amin'ny tsena iraisana ho an'i Afrika Atsinanana sy atsimo (COMESA) dia namporisihina hanafaingana ny fahavitan'ny tetik'asa fotodrafitrasa ankehitriny hanamafisana ny varotra isam-paritra.
Ny antso dia natao nandritra ny fivoriana faha-10 nataon'ny Komity momba ny fitaterana sy ny fifandraisana, ny haitao ary ny angovo natao tany Lusaka Zambia tamin'ny herinandro lasa teo. Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra misahana ny sekretera COMESA, ny fanjakana mpikambana dia mila mandray fanapahan-kevitra izay hanampy amin'ny fanafainganana ny fampiharana ireo fotodrafitrasa ataon'ny bloc.
Ny kaomisera ambony ao Rwanda any Zambia ary ny solontena maharitra ao amin'ny COMESA, Monique Mukaruliza, dia nilaza fa ny hanohana ny famitana ireo tetik'asa fotodrafitrasa miandry indrindra hitadiavana ny fivoaran'ny faritra.
Mathew Nkuwa, ny minisitry ny asa, ny fitaterana ary ny famatsiana ao Zambia, dia nilaza fa ilaina ny politika, ny rafitra, ny andrim-panjakana ary ny loharanon-karena hanohanana ny fampandrosoana sy ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa, ary nampiany fa hampihena ny elanelana misy eo amin'ny fotodrafitrasa, hanohanana ny ezaka fampihenana ny fahantrana, ary koa ity hetsika ity "Mamorona harena ary manatsara ny fampandrosoana toekarena ao amin'ny faritra COMESA".
Nkuwa dia nanasongadina ny tsy fahampian'ny loharanom-bola sy ara-teknika amin'ireo tetik'asa fananganana fotodrafitrasa ho iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny fahatarana amin'ny fizotry ny fampiharana.
"Ilaina ny famolavolana fotodrafitrasa maoderina izay hanamora ny fifanakalozana fanjakana eo amin'ny samy mpikambana," hoy izy nanampy.
Fanaraha-maso haingana ny fanalalahana ny habakabaka
Mandritra izany fotoana izany, nanaiky ny filohan'ny minisiteran'ny fotodrafitrasa COMESA fa ilaina ny manara-maso haingana ny fanalalahana ny habakabaka any amin'ny faritra mba hampitomboana ny fifandraisana sy hanamafisana ny varotra. Nambaran'izy ireo fa ny fanalefahana ny fitaterana an'habakabaka dia hitombo ny haavon'ny serivisy amin'ny serivisy ary hampihena ny saran-dàlana ary hanampy amin'ny fanentanana ny volan'ny fifamoivoizana sy hanamora ny fizahan-tany sy ny varotra. Rwanda dia mitarika ny tetikasa ankehitriny hampifangaro sy hanafaka ny habakabaka amin'ny bloc COMESA.
Ny valin'ny tetikasa fampidirana ny habakabaka COMESA dia araka ny filazan'ny manam-pahaizana momba ny fiaramanidina hametraka ny safidy ho an'ny fanomezana serivisy fitaterana rivotra sy serivisy fitaterana an-habakabaka ao amin'ny faritra.
Tamin'ny taona 2015, ny Sekretariatin'ny COMESA dia nahazo vola $ 10 tapitrisa teo ho eo tamin'ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana mba hanatanterahana ny Tetikasa fampidirana Airspace.
Ity dia fanomezana ho an'ny COMESA izay nomena ho ampahany amin'ny andraikitry ny banky amin'ny maha andrim-panjakan'ny Union Africa azy hanohana ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa sy ny serivisy manerana ny kaontinanta.
Araka ny fifanarahana COMESA Fampandrenesana laharana faha-2 amin'ny taona 1999, ny fanjakana mpikambana dia voatery manome sy manome zon'ny fifamoivoizana ho an'ireo mpandraharaha voatondro sy ny hatry ny serivisy eo amin'ny mpivady ao amin'ny faritry COMESA. Ny Kaomisiona misahana ny sidina sivily afrikanina (AFCAC) amin'izao fotoana izao dia mitarika ny famoronana tsena fitaterana an'habakabaka tokana any Afrika izay nanoloran'ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Afrikanina 15 anjara amin'ny fananganana tsenan-tsambo afrikanina tokana. Heverina noho izany fa ao anatin'ny faritra COMESA mihitsy, ny habakabaka manerantany dia mety hiteraka varotra ary hitarika fampandrosoana ara-toekarena maharitra.
Na izany aza dia niahiahy ireo minisitra fa mbola tsy nampiharina tanteraka ny fifanarahana. Raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny COMESA dia misy ny fisalasalana hampihatra tanteraka ny fifanarahana noho ny fampiasana hatrany ny fifanarahana serivisy momba ny serivisy an-habakabaka sy ireo firenena mpikambana izay milaza fa manana zotram-piaramanidina malemy.
Eo ihany koa ny tsy fisian'ny lalàna mifandrindra hanamorana ny fizotry ny fampiharana sy ny rafitra fanaraha-maso.
Jean-Baptiste Mutabazi, talen'ny fotodrafitrasa sy ny lojika COMESA, dia nilaza fa tokony hanangana fifanekena isam-paritra sy iraisam-pirenena ny seranam-piaramanidina COMESA hifaninana. Nanampy ny tompon'andraikitra fa ny fanjakana mpikambana dia tokony hiantoka farafahakeliny farafahakeliny amin'ny lafiny fiarovana sy filaminana, ary koa ny fitakiana fitoviana ara-toekarena.
Tany am-piandohan'ity taona ity dia nisy fanadihadiana iray nanondro fa ny liberalisationan'ny habakabaka eo anelanelan'ny firenena mpikambana ao amin'ny East Africa Community (EAC) dia hiteraka asa 46,320 fanampiny sy $ 202.1 tapitrisa (eo amin'ny Rwf165 miliara) isan-taona. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka afrikanina dia nitatitra fatiantoka $ 800 tapitrisa tamin'ny 2016 tamin'ny ankapobeny noho ny fifehezana ny habakabaka afrikanina.
Mandritra izany fotoana izany, ny taona ho avy dia hanomboka hanatanteraka programa mandritra ny fito taona izay hiafara amin'ny fametrahana ny habakabaka tsy misy tohana mifototra amin'ny lalàna sy fomba fanao amin'ny fiaramanidina sivily mirindra. Izany dia hiteraka fanatsarana ny fiarovana, ny filaminana, ny fihenan'ny vidin'ny asa sy ny dia amin'ny zotram-piaramanidina.